Maalinta: Diseembar 12, 2019
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Sivas Ankara, oo la rajeynayo inuu muddo dheer soo dhammaado, ayaa soo gabagaboobay. Abdullah Peker, Gudoomiyaha Ururka Shaqaalaha iyo Shaqaalaha Wadada Tareenka, ayaa u sheegay shirkadaha qandaraaslaha arintaas [More ...]
BOTAŞ ayaa ku guuleysatay qandaraaska qandaraaska fidinta gaaska dabiiciga ee Woqooyiga Marmara oo ay la socoto Choline; Toddobaadkii hore, BOTAŞ waxay sameysay jilicsanaanta 4,5 bilyan ginni. Shirkadaha Kolin iyo Kalyon ayaa ka qaybqaatay qandaraaska weyn ee BOTAŞ todobaadkii hore. [More ...]
Caasimadda ah ee mashruuca ballaarinta Airport Hamad Qatar shuqullada dhismaha ee Doha ee, ku guuleystay dallad tav kale oo laga helaa dhismaha, oo ay ku jiraan Turkiga. TAV Consortium, MIDMAC iyo Taisei Corporation JV [More ...]
Kooxda Nidaamka Tareenka ee Anadolu ayaa abaabushay Tababar Aqoonsi Waddo oo IRIS ah iyo aqoon isweydaarsi isbadal ah oo ku saabsan xubnaheeda DETİM. Shirkado badan oo ka socda waaxda nidaamka tareenka ayaa ka qeybgalay aqoon-isweydaarsiga lagu qabtay hoolka shirarka OSTİM OSB. [More ...]
Jannada cad Pamukkale markaa magaalada jannada labaad ee cad, Denizli Ski Center, waxay noqotay mid cad. Dowladda Hoose ee Magaalada Denizli waxay dhameystirtaa dhammaan diyaar garowga ay ku martigelineyso martida, furitaanka xilliga barafka ilaa dhumucda barafka la doonayo. [More ...]
Tababbarka Dabka ee Darawalada Gaadiidka Dadweynaha ee Gaadiidka Sakarya; Tababar dabeed ayaa la siiyay darawalada basaska ee u adeega waaxda gaadiidka. Tallaabooyinka looga hortago dabka iyo waxa la samayn karo inta dabka socdo [More ...]
gaadiidka hadda Turkey ee baaskiilka oo dhan gobolladiisa, Waddooyinkiisa baaskiil in loo isticmaalo ujeeddooyin sida si ay u bixiyaan navigation iyo qorshaynta ee ciyaaraha iyo saldhigga la dhigto baaskiilka, nidaamka mabaadi'da design iyo dhismaha oo mar kale ka go'an [More ...]
Hawlaha Korantada ee Dhismaha Farsamada ee lagu Dhisayo Mashruuca Saxiixida Saxeexa Waxaa Lagu Sameyn doonaa Saldhigga Köseköy Saadka Wareega Aaladda CCTV Nidaamka Amniga Kaameerada Rakibaadda Shaqaalaha Farsamada iyo Adeegga Kireynta Gawaarida Iibka Shaqaalaha Farsamada iyo [More ...]